Mhando brake calipers
Midhudhudhu akamedura mapureti Midhudhudhu idiki pane mota, saka inoda shoma braking simba. Zvakangodaro, mune dzimwe nzira, kugona kwemudhudhudhu kudzikira kana kumira kwakakosha kupfuura dzimwe mota. Unogona kubvunza izvozvo? Zvakanaka, kunyangwe zvidiki fender benders zvinogona kuuraya nekuti mutyairi haana ...
Kushanda musimboti akamedura caliper
Brake caliper yakakosha pakukwanisa kwemabhureki emota, uye zvinogona kunzi ndeimwe yezvakakosha mabhureki emota. Chero zvazviri, mota zhinji nhasi dzine disc mabhureki, angangoita mavhiri epamberi. Asi ikozvino mota zhinji nemarori anoshandisa ma disc mabhureki kumashure. Mune ...